Mareykanka oo War kasoo saaray duqeymo ka dhacay Gobalka Hiiraan. – Idil News
Mareykanka oo War kasoo saaray duqeymo ka dhacay Gobalka Hiiraan.
MUQDISHO (IDIL NEWS)-War kasoo baxay taliska Mareykanka ee qaaradda Afrika ayaa lagu faah faahiyay howlgal ka dhan Alshabaab,kaasi oo ka dhacay 1-dii bishan gobolka Hiiraan, waxaana mareykanka uu sheegay in uu Shabaab gaarsiiyay Khasaare.
Warka ayaa lagu sheegay in Ciidamada Soomaalida oo kaashanaya kuwa Mareykanka ay bartilmaameedsadeen degaan ka tirsan gobolka Hiiraan, islamarkaana ay halkaasi ku dileen ku dhawaad 26 dagaallame.
Taliska Mareykanka ayaa sheegay in howlgalka intii uu socday ay ka qeyb qaateen diyaaradaha aan duuliyaha la heyn ee Mareykanka, islamarkaana lagu burburiyay Gaadiid iyo goobo muhiim ah oo ay lahaayeen Al-Shabaab.